Children's Mercy Kansas City - Tallaabada #2: Qiyaasta Qiimaha Adeegyada Caafimaadka
Home > Clinics and Services > International Services > Af Soomaali > Tallaabada #2: Qiyaasta Qiimaha Adeegyada Caafimaadka
Af Soomaali Tallaabada #2: Qiyaasta Qiimaha Adeegyada Caafimaadka
Qiyaasta Qiimaha Adeegyada Caafimaadka Iyadoo lagu saleeyay soo jeedinta daaweeynta hore, shaqaalaha baadhitaanka hore ayaa diyaarin doona Qiyaasta Qiimaha Adeegyada Caafimaadka oo faahfaahin doona qiyaasta kharashyada khayraadka cisbitaalka iyo dhakhtarada ku hawlan qorshaha daryeelka caafimaadka aa n dhamaystirnayn ee ilmahaaga labadaba. Markay suurtowdo, waxaan bixin doonaa macluumaad la xidhiidha wixii khrash dheeraad ah ee imaan kara sida qalabka iyo alaabta caafimaadka, alaabta farmashiyaha, ama daaweyn bukaan-socod. Haddii la codsado, shaqaaluhu, shaqaaluhu waxa kale oo ay kaala talin karaan helitaanka iyo kharashyada la xidhiidha hudheelada ama guryeynta kumeelgaadhka ah ee Kansas City Missouri, iyo weliba gaadiidka gudaha iyo hareeraha magaalada.
Qiyaasta Qiimaha Adeegyada Caafimaadka MA aha qiimo go'an, mana aha qiimaha dhabta ah ee qiimaynta cilad-sheegista iyo daaweynta daba socota.
Qorshaha la soo jeediyey ee daryeelka wuu isbeddeli karaa marka ilmahaaga lagu baadho CMH, oo, wuu isbeddeli karaa xataa mudda ay daaweyntu socoto. Qiyaasta Qiimaha Adeegyada Caafimaadka waa lagu noqon doonaa iyada ku xidhan daaweynta oo dhakhtarku soo jeediyo iyo isbeddelada kale ee la socda.
Waxa daruuri ah in CMH iyo dhakhtarrada kiliinigyada iyo shaqaaluhu u wada shaqeeyaan koox ahaan si loo siiyo adiga iyo qoyskaaga qiimaha caafimaad ee dhabta ah iyo macluumaadka lacageed ee suurtagal ah.
Hase ahaatee, marar badan, suurtagal ma aha in la qeexo dhammaan waxyaabaha saamayn kara cilad-sheegista iyo daaweynta daba socota ee la soo jeediyey, iyo sida loo fahmi karo carqaladaha jirrada ama xaalada, illaa dhakhtarada CMH ay baadhaan ilmahaaga.